Wafdi uu hogaaminaayo raa’iisul wasaare ku xigeenka dalka Turki oo soo gaarey Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wafdi uu hogaaminaayo raa’iisul wasaare ku xigeenka dalka Turki oo soo gaarey...
Wafdi uu hogaaminaayo raa’iisul wasaare ku xigeenka dalka Turki oo soo gaarey Muqdisho
Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Turkiga Hakan Cawuşoglu ayaa goordhow soo gaaray magaalada Muqdisho,waxaana si weyn loogu soo dhoweeyay Garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiin Dowladda ka tirsan oo uu horkacayo Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa Garoonka diyaaradaha Adan cade ku soo dhoweeyay Ra’iisal wasaare kuxigeenka dalka Turkiga iyo Wafdiga uu hogaaminayo.
Hakan Jaush Ogolo raiisul Wasaare kuxigeenka Turkiga iyo wafdigiisa oo uu wehliyo dhigiisa Soomaaliya ayaa booqday saldhigga Militari ee Turkiga uu ku tababaro Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ee ku yaalo deegaanka Jazeera ee duleedka Muqdisho.
Mas’uuliyiintani ayaa waxaa ay kormeer ku sameeyeen qeybaha uu saldhigaasi ka kooban yahay, iyagoo u kuurgalaya sida ay u socdaan howlaha tababarka Ciidanka Xooga Dalkaoo qeyb ka ah taageerada Turkigu uu u fidinayo Soomaaliya.
Waxaa halkaasi hadalo ka jeediyay R/wasaare kuxigeenada Soomaaliya iyo Turkiga, iyagoo si weyn uga hadlay ahmiyada ay leedahay xoojinta xiriira walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Sidoo kale,Ra’iisal wasaare Ku-xigeenka dalka Turkiga ayaa inta uu ku sugan magaalada Muqdisho la kulmi doono madaxda Dowladda Soomaaliya.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo Boggaadiyay Xuska Sannad guuradii 48-aad ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed
Next articleMadaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland oo soo dhawayeeyay howlgallo lagu baacsanayo xubno xiriir la leh Al-shabaab